Barnaamijyada si aad u daawato TV-ga bilaash ah, xitaa kanaalada lacag-u-eegid kasta! | Androidsis
Ignacio Sala | | Codsiyada Android, Streaming, Khiyaamada Android, Tababarada
Waxaan ku jirnaa waqtiyada fasaxa dad badan, waqti aan ku nasanno oo aan uga faa'iideysanno waqtiga firaaqada ah ee aada barkadda ama xeebta, waxaan u baxeynaa casho qabow, iyo markaan guriga ku soo laabanno si aan u daawanno telefishanka in yar oo hab deggan.
Taasi waa sababta aan dhowr jeer kuu keenayo barnaamijyada si aad u daawato TV-ga oo bilaash ah inay hubaal kuula raaci doonaan xagaaga oo dhan meel kasta oo aad tagtid, labadan codsi ee bilaashka ahna waan awoodi doonaa, marka lagu daro daawashada TV-ga oo bilaash ah, telefishanka qof walba ficil ahaan, waa naloo oggolaan daawan tan oo ah kanaalada lacag-bixinta-ee-bilaash ah.
Waxa ugu yaabka badan ayaa ah inaad tahay laba barnaamij oo aad ku daawan karto TV-ga si bilaash ah Waxaan ka soo dejisan karnaa iyaga oo bilaash ah Google Play Store, oo ah dukaanka rasmiga ah ee loogu talagalay Android. Marka ku deg deg inaad soo dejiso ka hor intaan laga saarin dukaanka Google.
Hadday ahaan lahayd kiiska inaad goor hore ka daahday inaad soo dejiso kuwan laba codsi oo aad ku daawan karto TV-ga si bilaash ah ka dukaanka rasmiga ah ee Android, ha ka welwelin rajo xumo aad u yar tan iyo markii GrupoAndroidsis oo ku saabsan Telegram waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho labadan apk toos u soo dejinta si aad kaliya u weydiiso maamulka kooxda Jorge Alejo, Dezfachatado, Ademir ama ka geesta.
1 Heliaca TV iyo Ketchup Canli TV
2 Kala soo bax Heliaca Tv oo bilaash ah APK PURE
3 Ka soo degso MOBDRO TV bilaash degelkaaga, Ketchup mar dambe ma shaqeyso
Heliaca TV iyo Ketchup Canli TV
Heliaca TV iyo Ketchup TV waa barnaamij noo ogolaanaya inaan TV-ga si bilaash ah u daawano laga bilaabo adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa loogu yeero kanaalada lacag-bixinta-arag, PPV, oo aan sidoo kale ka heli karno oo ka daawan karno gebi ahaanba lacag la'aan codsigan xiisaha leh ee loogu talagalay Android.
Codsi aad ufudud in loo isticmaalo kaas oo, marka ugu horeysa, isla marka aan furno, naloo tusi doono liiska wadamada ama meelaha juquraafi ahaan u dhigma telefishannada bilaashka ah iyo kuwa lacag-bixinta ah ee barnaamij kasta ka kooban yahay gebi ahaanba bilaash.
Marka, tusaale ahaan, waxaan leenahay dalal iyo aagag juqraafiyeed sida kuwa aan ku faahfaahiyo xagga hoose:
Liiskan ballaadhan ee waddamada waxaan ku leenahay aqlabiyadda kanaalada guud iyo kanaalada lacag bixinta ee ka shaqeeya dhulka aan soo sheegnayTusaale ahaan, aagga Isbaanishka, oo halkan ah 'Androidsis' ayaa noo daneynaya ugu badan sababtoo ah juqraafi ahaan meesha aan ku suganahay, liiska kanaallada ay ku jiraan waa kuwan soo socda:
finalka Super Cup
Shineemo M + D
M + Horudhac
M + Majaajilo
M + Waxqabadka
M + Taxanaha
M + Taxane Dheeraad ah
M + Ciyaaraha
TV -ga Real Madrid
Sideed u aragtaa liiska kanaallada ay labada codsiba leeyihiin, ugu yaraan aagga ama dhulka Spain, ay si fiican u buuxsan yihiin, oo leh liisas ballaadhan oo ah kanaalada guud, kanaalada dadweynaha iyo kuwa gobollada iyo sidoo kale bixinta-aragti-aragtida ah in runta loo sheego, intooda badan, ama ugu yaraan kuwa aan awooday inaan shakhsi ahaan u tijaabiyo, waxay u shaqeeyaan si aad u wanaagsan.
Cusboonaysii: maadaama ay umuuqato in barnaamijyadan lagu daawanayo TV-ga aysan hadda ka jirin Play Store, waxaan kugula talineynaa inaad adiga Ciyaaryahan MegaTV, barnaamij kale si loo arko kanaalada lacag bixinta iyadoo aan la bixin, waxaan sidoo kale ku lifaaqnay xiriir Heliaca TV ka soo dejiso ilo kale oo lagu kalsoon yahay sidoo kale waxaan ku badalnay Ketchup TV MOBDRO Midka aniga aniga ah ayaa ah barnaamijka ugu fiican xilligan si aan u daawado TV-ga lacag-bixinta oo bilaash ah.
Kala soo bax Heliaca Tv oo bilaash ah APK PURE
Halkan ka degso
Ka soo degso MOBDRO TV bilaash degelkaaga, Ketchup mar dambe ma shaqeyso
Kuwo badan ayaa ah kuwa adeegsada liistada IPTV si ay u awoodaan inay daawadaan DTT (marka lagu daro kanaalada kale ee lacagta lagu bixiyo ee bilaashka ah). Si kastaba ha noqotee, liisaska noocan ah sida caadiga ah looma cusbooneysiiyo si joogto ah xaaladaha badanaaba, waqti gaaban ka dib, inta badan kanaalada ayaa joojiya in la arko, taas oo waxay nagu qasbeysaa inaan markale raadino waxyaabo kale.
In kasta oo tirada telefishannada qoyskiiba aad u badan yahay, haddana dhammaan xubnaha unugyada qoysku kama haystaan ​​TV-ga meesha ay ku sugan yihiin markay u baahdaan. Xaaladahaas, IPTV-ga ayaa liis garanaya oo aan kor uga soo hadlay. Ikhtiyaar loo adeegsado bogagga rasmiga ah ee kanaallada aan dooneyno inaan aragno. Mid kale ayaa ku dhacda inuu yeesho dhammaan kanaalka DTT ee bilaashka ah hal codsi.
Dukaanka Play-ka waxaan ku haynaa codsiyo aad u tiro badan oo u taagan hage telefishan, in kasta oo ay noo oggolaadaan inaan ka daawanno DTT aaladdayada, hase yeeshe, dhammaantood si sax ah uma shaqeeyaan, lamana cusbooneysiin sidii loogu baahnaa si ay u soo bandhigaan tayo adeegga username xuquuqda shabakadaha telefishanka.
Haddii aad raadineyso codsi si aad u daawato DTT meel kasta oo aad joogto, ama taleefanka casriga ah ama kaniiniga, ka dib waxaan ku tusinaynaa laba ikhtiyaar oo aad u fiican ka daawo DTT Android.
Codsiga ugu horreeya ee aan ka hadlayno waxaa loo yaqaan 'TDT Channels', barnaamijku wuxuu sameeyaa waxa uu dhiirrigeliyaa mana aha wax kale oo aan noo oggolaanayn daawan dhammaan kanaalka DTT gebi ahaanba bilaash oo aan lahayn wax xayeysiis ah. Codsiga waxaa sameeyay Isbaanishka Marc Vila, oo isna isagu mas'uul ka ah cusbooneysiinta ilaha arjiga si markaa dhammaan marinnada marwalba loo heli karo.
Haddii aan caado ka dhigannay adeegsiga codsi IPTV ah, oo aan awoodnay inaan lacag ku bixinno oo aanan jeclayn isku xirnaanta codsigan (aad ayey u yar tahay), waxaan isticmaali karnaa Liisaska IPTV in aan ku hayno isla bogga isla markaana aan ku soo dejisan karno arjiga. Liisyadan waxay la mid yihiin kuwa uu isticmaalay codsigu, haddaba, macno malahan inaad isticmaaleyso barnaamijka DTT Channels ama codsi IPTV ah.
Si ka duwan barnaamijyada kale, TDTChannels, ayaa noo ogolaanaya, ma aha oo kaliya inaan marinno kanaalada guud ee DTT, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan marin u helno dhammaan marinnada gobolka ee laga heli karo Spain, hawl shaki la'aan ay qaddarin doonaan dhammaan kuwa, qoys ahaan ama sababo shaqo awgood, ku sugan bannaanka gobolka dhalashada laakiin doonaya in lala socodsiiyo mar walba waxa ka dhacaya beeshooda.
Qaboobaha keega ayaa ah inay sidoo kale noo ogolaaneyso inaan marino idaacadaha guud, sidaa darteed waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa arjiga inaan ku dhageysano idaacadaha aan jecel nahay, ha ahaado warar ama muusig. TDT Channels waa sida mindida ciidanka Switzerland, oo ah wax walba oo noo ogolaanaya ku raaxayso hawlo badan oo hal codsi ah.
Sida kaliya ee loogu raaxeysan karo DTT kaniiniga casriga ah ee 'Android' waa iyada oo loo marayo codsi taas ah lama heli karo Play Store ee Google, oo macnaheedu yahay inuu hawlgeliyey xarumaha barnaamijyada laga helo ilo aan la aqoon.
para soo dejiso barnaamijka TDTChannels, waa inaan soo booqano boggooda, websaydh meesha, habka, aan sidoo kale uga arki karno khadka tooska ah. Si aan u soo degsano nooca Android, waa inaan gujinnaa calaamadda Android, oo ku taal dhinaca midig ee View Online qeybta kore ee bogga.
Marka la soo dejiyo oo la rakibo, waa inaan furnaa arjiga, Xullo haddii aan rabno inaan daawanno DTT ama aan dhageysanno idaacad loo maqli karo inuu bilaabo. By habka, hawsha noo oggolaaneysa inaan dhageysano raadiyaha ayaa ka shaqeynaya asalka.
TDTChannels ayaa noo ogolaanaya raadinta idaacadaha ama idaacadaha, marka lagu daro inay na siiso suurtagalnimada kala shaandhee telefishanka iyo kanaalada raadiyaha bulshada iswada leh, shaqo ku habboon in lagu baabi'iyo istaroog dhammaan telefishinnada gobolka ee aanan qorsheyneynin inaan aragno.
Sidaan uga faallooday qaybtii hore, codsi noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano DTT khadka tooska ah ee bilaashka ah, waa inaan laga helin Play Store sababo la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha xuquuqda kanaalada telefishanka. Beddelka kale ee aan soo jeedineyno inaan ugu raaxeysto DTT taleefankaaga casriga ah, codsi maahan ee waa bog.
Waxaan ka hadlayaa webka photocall.tv, degel noo ogolaanaya marin dhammaan marinnada Isbaanishka DTT marka lagu daro tiro badan oo kanaal caalami ah oo si toos ah uga socda biraawsarkayaga iyada oo aan la rakibin wax codsi dhinac saddexaad ah.
Waxay kaloo na siisaa marinka marinnada lacag-bixinta ugu weyn, laakiin si toos ah maahan, laakiin ku xirnaanshaha bogagga kale ee noo ogolaanaya inaan sidaas yeelno, markaa xaaladaha badankood, badanaa ma shaqeeyo oo haddii ay shaqeyso, waxaan la kulmi doonnaa qaddar ballaadhan oo xayeysiin ah, marka ma aha wax lagu talin karo in la isticmaalo doorashadan.
Sida TDTChannels, photocall.tv Waxay kaloo bixisaa helitaanka idaacadaha waaweyn, maaha oo kaliya Spain laakiin sidoo kale adduunka oo dhan, sidaa darteed waxaan u isticmaali karnaa adduunka oo dhan, kuma koobna Spain kaliya sidii codsigii hore. Si loo fududeeyo helitaanka kanaalka aan raadineyno, waxaan isticmaali karnaa mashiinka raadinta isku dhafan ee ku yaal xagga sare ee bogga.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan marin u helno barnaamijyada 'DTT', kuna xirnaano hagayaasha TV-ga sida TV Guía, Vertele, Formula TV, Claro TV, IzziTV, Fútbol TV, Halkee laga daawan karaa ... Hawl kale oo websaydhkani sidoo kale na siinayo, waa xiriiriyeyaal lagu rakibo fidinta Chrome ama Firefox noocyadooda desktop si ay u soo saaraan waxa ku jira, kanaalka duubista, miirayaasha xayeysiinta, VPN ...
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan tixgelinno si aan u isticmaalno boggan waa biraawsarka. Labada daalacashada ee ugu fiican oo leh boggan oo leh Chrome iyo Firefox, oo aan fursad ugu helay inaan ku tijaabiyo oo aan ku xaqiijiyo hawlgalkooda.
Si aan u daawanno kanaal gaar ah, waa inaan gujino magiciisa oo aan ka xusho Toos ama waddanka aan ka dooneyno inaan ka daawado tabinta xilligaas, ma aha in dhammaan kanaallada ay na siinayaan isla xulashooyinka, waxaa jira qaar ka mid ah riixitaanka wuxuu si toos ah u bilaabayaa ciyaaris.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada si aad u daawato TV-ga bilaash ah, xitaa kanaalada lacag-u-eegid kasta!
Jawaab Fernando Cil Castillo
waxaa jira codsi la mid ah kombuyuutarka
Sababtoo ah looma soo dejin karo APP. Maxaan sameyn karaa
Waa salaaman tahay Waxaan jeclaan lahaa isku xirka codsiyadaas maadaama playstire-ka aysan horay ugu mahadin
Ku jawaab Itza
Miyaad ii gudbin kartaa xiriiriye toos ah oo toos ah oo loogu talagalay Heliaca iyo Ketchup tv?
Sideen ku abuuri karaa codsi la mid ah ama la mid ah kuwan?
Ku jawaab juanito
oo maxaan uga faaloodaa haduu ninku jawaabin. Waa wax aad u fiican waana u mahadcelinayaa laakiin isagu ma jawaabo. Waxaan rabaa inaan ku arko laptop-ka, ma jiraa barnaamij taas loogu talagalay?
Clyma Weather waa barnaamij cimilo cusub oo fudud oo isku daraya xogta 3 bixiye